FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BOXER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Boxer Dog
Greta, ohatra tsara amin'ny American Boxer
Ny vatan'i Boxer dia volo sy matanjaka. Mifanaraka amin'ny vatana ny loha. Fohy sy fohy ny vavam-borona ary mijanona tampoka. Ny orona dia lehibe sy mainty misy vavorony. Ny valanoranony dia eo ambanin'ny manaikitra. Mavo mainty ny maso. Ny sofina dia avo dia avo, na voaoty na voahazona voajanahary. Rehefa nokapaina dia nampiofanina hijoro amin'ny lohany izy ireo, ary mihidy hatramin'ny teboka iray. Rehefa avela voajanahary ny sofina dia manify, mianjera mandroso, mandry eo an-doha. Ny vozony dia tokony ho boribory, matanjaka ary hozatra, tsy misy andilany. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy sy mifanitsy rehefa jerena avy eo aloha. Ny hozatra any aoriana dia misy hozatra tsara. Atao avo ny rambony ary miraikitra matetika. Ny AKC dia manasazy mafy ny rambony voajanahary, raha ny ankamaroan'ny Eropa dia mandrara izany fanao izany. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny palitao fohy, malama, mifanakaiky dia tonga amin'ny volon'osy, brindle, tan, mahogany ary mainty misy marika fotsy. Ny mpanao ady totohondry koa dia tonga amin'ny palitao fotsy izay tsy azo soratana amin'ny klioba sasany.
Ny Boxer dia falifaly, be zotom-po, milalao, liana ary mahery. Tena manan-tsaina, dodona ary haingana hianarana, ny Boxer dia alika tsara amin'ny fankatoavana fifaninanana. Mihetsika tsy tapaka izy io ary mifamatotra akaiky amin'ny fianakaviana. Tsy mivadika sy be fitiavana, Boxers dia fantatra amin'ny fomba nifaneraserany tsara tamin'ny ankizy. Entina tsara sy araka ny tokony ho izy ifaneraserana Boxer koa dia hifanaraka amin'ireo karazana biby fiompy ao aminy toy ny saka . Biby toy ny biby mpikiky , ganagana , akoho ary ny vorona fiompiana hafa dia mety halaim-panahy loatra, na izany aza, azo ampianarina izy ireo 'hamela azy' nefa mbola tsy tokony hasaina avelan'izy ireo irery miaraka amin'izy ireo. Nolazaina fa ny anarana Boxer dia avy amin'ny fomba itiavan'ny Boxer ny tongony eo anoloana amin'ny zavatra rehetra. Raha efa nijery Boxer nitety ny orinasany ianao dia mety ho hitanao ny fomba nitazomana ny kilalao, ny lovia fisakafoanana ary anao ho an'izany, amin'ny fomba mitovy amin'ny saka. Raha mandray anjara amin'ny fanatanjahantena Schutzhund dia fantatra fa hitsambikina sy hampiasa ny tongony eo anoloana toy ny hoe manao ady totohondry izy. Tena clownish sy milalao izy ireo. Ny toetran'ny Boxer dia ny miaro anao sy ny ankohonanao ary ny tranonao. Horaisina ny mpitsidika fanta-daza. Vonona hiasa sy hilalao foana izy ireo. Mila be ny boxers fitarihana olombelona . Ampianaro ny Boxer mba tsy ho be tabataba ary indrindra tsy mitsambikina amin'ny olona . Ity karazan-kazo ity dia marihina ho be herim-po ary mampandroso amboa mpiambina . Ny boxer dia be mpampiasa amin'ny asa miaramila sy polisy. Mpiambina tena tsara, ny Boxer dia hisakana an mpiditra an-tsokosoko toy izany koa a Bulldog manao. Tena mpanao fanatanjahan-tena izy ireo, indraindray na dia amin'ny fahanterany aza. Mila mitohy ity alika ity a fitsangatsanganana entana isan'andro . Ny fampihetseham-batana ara-tsaina sy ara-batana isan'andro no zava-dehibe indrindra. Raha tsy misy azy dia ho lasa strung ambony ny Boxer. Ity karazana ity dia mitaky a tompony manjaka . Tokony hanomboka tanora ny fiofanana ary ho hentitra sy tsy miovaova. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa ao ambanin'ny tsipika mpitarika tokana ary voafaritra mazava tsara. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Ireo tompona Meek Boxer dia hahita ny alikany ho mafy loha. Raha tsy manao izany izy ireo raiso am-pahatsorana ianao ho saro-pantarina izy ireo, mitaky, mitabataba ary sarotra fehezina. Ampianaro ny Boxer manjaka alika hafa dia tsy ekena. Ny famantarana ny fanjakazahana rehetra dia mila ahitsy avy hatrany amin'ny tompony amin'ny fomba milamina, nefa mafy orina ary matoky tena.
mpiandry mpiandry alemanina cozhound mainty sy tan
Haavony: Lehilahy 22 - 25 santimetatra (56 - 63 cm) Vehivavy 21 - 24 santimetatra (53 - 61 cm)
Milanja: Lehilahy 60 - 70 pounds (27 - 32 kg) Vehivavy 53 - 65 pounds (24 - 29 kg)
Ny olana lehibe sasany dia ny aretim-po sy ny aretim-po, ny stenosis a-suboort ary ny tiroida. Mety mora tohina amin'ny hoditra sy ny allergy hafa. Indraindray mora voan'ny androbe. Manomboka amin'ny valo taona dia mahazo fivontosana izy ireo noho ny karazany hafa. Mora amin'ny cancer . Mora voina ny mpanao ady totohondry fivontosan'ny sela . Mora amin'ny vanin-taolana , olana amin'ny tampoka, ny lamosina sy ny lohalika. Ireo alika ireo dia mety hidina anaty rano sy hikorontana. Mety misy kibo be loatra, indrindra rehefa misakafo zavatra hafa ankoatry ny azy sakafo alika . Ny boxers fotsy sasany dia mora tohina.
Tsy maninona ny mpanao ady totohondry ao amin'ny trano iray raha toa ka zatra ampiasaina. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary manao ny tsara indrindra amin'ny tokotanin-trano farafahakeliny. Marefo ny mari-pana amin'ny ady totohondry, mora mafana be ary mangatsiaka haingana.
sisin-tany collie / fifangaroan'ny heeler manga
Karazana atletisma mavitrika, mpanao ady totohondry, mila asa isan'andro na fanaovana fanatanjahan-tena, ary koa bisikileta lava, mandeha isan'andro . Mahafinaritra azy ireo ihany koa ny maka baolina na fotoam-pilalaovana hafa.
11-14 taona eo ho eo
Alika kely 10 - 10, 6 eo ho eo
Ny palitao malefaka fohy volo an'ny Boxer dia mora haingo. Borosio amin'ny borosy mafy volo, ary sasao ny mandro raha tsy ilaina izany, satria manala ny menaka voajanahary amin'ny hoditra. Ny Boxers sasany dia manandrana mitazona ny tenany ho madio, miseho ho toy ny saka, na dia tsy mahatohitra aza ny sasany amin'ny fihodinam-bilona amin'ny biby hafa, izay mila fandroana. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Boxer dia novolavolaina tany Alemana tamin'ny taonjato faha-19. Ny razamben'i Boxer dia alika alika mastiff roa, ny Bullenbeiszer ary ny Barenbeiszer. Niampita niaraka tamin'ny razana mahery an'ny Mastiff sy Bulldog izy ireo avy eo. Ny Boxer tany am-boalohany dia nampiasaina tamin'ny ady alika, ny fihazana omby, ny fitarihana sarety, toy ny alika omby, hamory biby fiompy ary hisambotra sy hametahana kisoa sy bison dia mandra-pahatongan'ny mpihaza. Nanjary alika teatra sy sirikazy izy ireo taty aoriana. Ny bokin-jaza Boxer voalohany dia natomboka tamin'ny taona 1904. Hatramin'izay dia niovaova arakaraka ny habeny sy ny habeny ny alika. Ny Boxer dia fantatra amin'ny fomba fampiasany ny tongony eo aloha hikapohana ny mpanohitra azy, toa ady totohondry, azo inoana fa nanome ny anarany ny alika. Ny sasany amin'ireo talentan'ny Boxer dia ny mpiambina, mpiambina, asan'ny polisy, asa miaramila, fikarohana sy famonjena, fankatoavana amin'ny fifaninanana, Schutzhund ary fanaovana hafetsena. Ireo mpiompy dia miteraka karazana Boxers roa, ny German Boxer ary ny American Boxer. Manana loha lehibe kokoa ny mpiady totohondry alemà ary mazàna dia be hozatra kokoa noho ny amerikanina boxers.
mpiandry astraliana kilalao feno
Mastiff, miasa ny AKC
CCR = Registra Canine Kanadiana
Bruiser the Boxer amin'ny faha-8 taonany
'Hey Yall! Lilly no anarako! 2 taona aho ary izao vao hitako ny reniko sy ny raiko mandrakizay :) Hitan'izy ireo fotsiny fa niondrika TAMIN'NY alina tontolo aho, saingy tsy maninona, toy izany koa ny dadako !! Manana rahavavy atao hoe Rascal aho, izy Chihuahua ary tena tiany aho. Nilaza i Neny fa tsy maintsy milalao mahafinaritra aho fa ny tiako fotsiny dia ny fofona azy !! Mino aho fa maheno an'i Neny mahazo ny sakafoko! Mila mihazakazaka !!! '
Lilly the Boxer amin'ny faha-2 taonany
Greta, Sadie ary Kaisara, mpanao ady totohondry amerikanina rehetra
vava mainty cur mifangaro alika kely
Bruno, (ankavia) brindle 5 volana Alika kely miaraka amin'i Allie (ankavanana) zazavavy Boxer 7 taona, mivoaka an-tongotra - Alika mahery i Boxers ary mila mandeha isan'andro tsy mila fampihetseham-batana mety hahatonga azy ireo hanao ratsy. Aza hadino ny mandehandeha eo akaikinao na any aorianao ny Boxer anao, miadana amin'ny fehikibo (tsy misy fihenjanana) aza avela hisarika anao eo alohanao. ny mpitondra entana no mandeha aloha .
'Ity i Midas, Boxer voalohany. Nandinika betsaka an'ity tranonkala ity aho mba hahitana ny karazany tsara indrindra ho an'ny fianakaviako satria manan-janaka 3 izahay, ny kely indrindra dia 1 1/2 fotsiny tamin'izany fotoana izany. Wow, tsy azoko atao ny mamaky ny atao hoe Boxers MAHAY! Ny zanako 3 taona izao dia afaka mamintina azy ary mitafy azy ary mihazakazaka azy miaraka amin'ny stroller saribakoly ary tsy miraharaha izy! Goofball be izy, nefa tena hendry. Nianatra 'nanome paw' izy tao anatin'ny 5 minitra. Manana kilalao antsointsika hoe 'zanany' izy ary hihazakazaka foana izy haka azy raha manontany azy ianao hoe aiza izany. Tiako i Cesar the Dog Whisperer ary hitako fa marina ny nolazainy taminao mampihetsi-po ny alikanao ! Raha Midas tsy ampy fanatanjahan-tena miaraka aminay, azonao atao ny manome toky fa hiditra ao anaty fitoeram-pako izy hanangana ny lalao 'famenoana siny amin'ny ronono.' Aza tezitra amin'ny alikanao - mandehana mandany fotoana miaraka aminy! Izahay izao dia mikasa ny hanampy Boxer faharoa amin'ny fianakaviana, ary aza mieritreritra ny hanana alika hafa intsony aho! '
Midas the Boxer toy ny alika kely
Mialà alika kely amin'ny Boxer amin'ny 3 ½ herinandro
'Amie maka Bruno the Boxer hoan'ny mandehana eny ivelany —Amie afaka nifandray tamin'i Bruno fa tiany izy hiakatra eo akaikiny amin'ny alàlan'ny fiantsoana azy ary amin'ny fampiasana fambara tanana mba tsy handalo azy. Raha mahazo dingana vitsivitsy mialoha izy dia hikasika ny lamosiny fotsiny amin'ny rantsantanany na hanao feo ary hiadana izy. Satria i Amie dia mpitondra entana 100% dia tena nanaiky ny baikony i Bruno. Tsy miteny na dia iray aza raha mihodina i Amie dia mihodina i Bruno. Raha mijanona izy dia mijanona. Manaraka azy an-tsitrapo izy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Boxer
Sarin'ny boxer 1
Sarin'ny boxer 2
Sarin'ny boxer 3
Sarin'ny boxer 4
Sary boxer 5
Sarin'ny boxer 6
Sarin'ny Boxer 7
Sarin'ny boxer 8
Sarin'ny Boxer 9
Sarin'ny Boxer 10
Sarin'ny boxer 11
Sarin'ny Boxer 12
Sarin'ny Boxer 13
Sarin'ny Boxer 14
Fitaizana alika kely: Bruno the Boxer
Lisitry ny alika manga volo
Alika mpiady totohondry: sary an-tsokosoko voaangona
chiwawa afangaro amin'ny jack russell
Firy ny alika kely no sahaza Alemana shorthaired manana
dachshund / kely pinscher Mix
mpiandry ondry australianina mini black
sarin'ireo mpiandry mpiandry ady totohondry
amboadia fotsy alemana mpiandry ondry mifangaro